Haacaaluu Hundeessaa Nafxanyootaan Ajjeefameera!! – Kichuu
HomeNewsAfricaHaacaaluu Hundeessaa Nafxanyootaan Ajjeefameera!!
Hacee koo, goota Wayyaaneen qusatte Abiyyi galaafate.
Wanni Hacaaluutti dhufte Oromoo tokko tokkoon mana manatti seentee gorra’uuf jirti. Hacaaluun goota, hobbaafateera. Hacaaluu miti kan du’e, Oromoo lafarratti hafnetu duune!
Haacaaluun Rasaasaan Rukutamuun dhugaadha.
Garamitti deemaa Jirra ?
Haacaaluu Hundeessaa Nafxanyootaan Ajjeefameera
Why Haachaalu! https://t.co/r2LKjK3oyQ
— Henok G. Gabisa (@henokgabisa) June 29, 2020
“Reffi Haacaaluu yeroo ammaa naannoo labuu kan jiru yoo ta’u Nafxenyoonni Jamoo 3ffaa jiran waliif bilbiluun meeshaa keessan qabadhaati bilbila dhageeffadhaa jechuun wal beellamaa jiru jedhu ijoolleen oromoo mooraa Naxfeyootaa kireeffachuun jiraatan!
Ofeeggannoo guddaa barbaachisa!”
FINFINNEE —(voaafaanoromoo)— Artist Haacaaluu Hundeessaa har’aa galgala tilmaamaan naannoo sa’aatti 3:30 Magaalaa Finfinnee bakka adda Kondominiiyemii Galaan jedhamutti ajjeffame jedhame. Yeroo amma reenfii isaa Naannoo Labu akka jiru namoonni naannoo sana jiran dubataniru. Akka odeeffannoo gahaa argannen dabalataa argannen sinitti deebina.
Seenaan Eebbisaa Addunyaa ammaas nutti deebitee?
Wayyaanee fi OPDOn Eebbisaa Adunyaa nyaatte, Bultee Nafxanyaan Bilxiginnaan Hacaaluu nyaatte
Naannoo Qe’ee Jawaar fi Jaal Daawuditti Waraanni Ariifataan ergameera, maaliif?
Weellisaan Oromoo beekkamaan Artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun mirkanaawe. Artist Hacaaluun Hundeessaa guyyaa adhaa magaalaa Finfinnee naannoo kondominiyeemii Galaan jedhamuutti rasaasaan eega rukutameen duuba hospitaala Xurunesh Beijing General geeffamulle dandamatuu waan hin danda’iniif lubbuun keessaa baatee jirti. Du’a Hacaaluu amanuu dadhabe. Goota keenna biyyeen sitta haa sallatu. Yoomiyyuu si hin irraanfannu. Oromoon yennaa tanatti tokkummaan woliin dhaabbachuu qofattu fala ta’aaf!
OMN: Dhaddacha Dubbii – Atleet Fayyisaa Leellisaa (Wax 29, 2020)